Esona sikhululo sikaloliwe sixakekileyo eYurophu sakhiwe ngaphakathi 3 iminyaka, phakathi 1861 yaye 1864. Uyilo loyilo 9 Imifanekiso eqingqiweyo ehombisa isitishi sikaloliwe ngaphakathi kunye 23 Imifanekiso eqingqiweyo ihonjiswa kwindawo yesitishi. Imifanekiso eqingqiweyo imele iidolophu eziphambili zaseYurophu isitimela esixhuma eParis.
Engaphezulu kwe 500,000 Abakhweli badlula eHamburg Hbf (I-Hbf ligama elifutshane eliya eHauptbahnhof eliguqulela isikhululo esikuMbindi) isikhululo sikaloliwe eJamani. Ngaloo ndlela, sesona sikhululo sesitimela esisesona sixakekileyo eYurophu.
Ukuba uceba ukwenza njalo zokuhamba train ukuya eJamani, ungawonwabela umculo weklasikhi. ke, ngelixa uthenga izikhumbuzo zemizuzu yokugqibela, izinto ezibalulekileyo zokuhamba, kunye nokubamba ukuluma ukuze utye, wamkelekile ukumamela kwaye ukonwabele amaXesha amane eVivaldi.